जापानी भाषामा 'खान्जी' किन चाहिन्छ ? | Nepali In Japan
Monday, May 17जापानबारे सबै कुरा
जापानी भाषामा ‘खान्जी’ किन चाहिन्छ ?
April 21, 2018 April 30, 2021
जापानी भाषामा हिरागाना, कातागाना र खान्जी गरी तीन प्रकारका अक्षरहरू हुन्छन् । जापानी भाषा सिक्न चाहनेहरूले शुरूमा हिरागाना र कातागाना जान्नै पर्ने हुन्छ । हिरागाना, कातागाना र खान्जीको समिश्रणबाट नै शब्द र वाक्य बन्ने गर्दछ । हुन त हिरागाना र कातागाना मात्रै जानेर पनि धेरै कुराहरू पढ्न, लेख्न र बुझ्न सकिन्छ । तर खान्जी अक्षर समावेश नभएको खण्डमा लेखिएको कुरा पढ्न अप्ठेरो हुने कुरा त छँदैछ त्यो भन्दा पनि कतिपय अवस्थामा लेखिएको कुराको अर्थ बुझ्न अप्ठेरो हुन्छ ।
नेपाली भाषामा (जुन-जून, फुल-फूल, जुवा-जूवा) जस्तै उच्चारण एउटै भए पनि अर्थ भिन्न हुने शब्दहरू जापानी भाषामा पनि हुन्छन् । हिरागानामा मात्रै लेख्ने हाे भने अक्षर र उच्चारण एउटै हुने शब्दहरू छन् । जस्तैः (にほん (日本-二本)、はし (橋-端)、あか (赤-垢) । यी शब्दहरूकाे हिरागानामा लेख्दा र उच्चारण एउटै भए पनि अर्थ भने निकै भिन्न छ । उक्त अवस्थामा प्रयोग भएको खान्जी हेरेर सही अर्थ बुझ्न सकिने भएकोले जापानी भाषामा खान्जी समावेश हुन जरूरी छ । त्यसो त हिरागाना मात्रैमा लेख्दा पढ्न अप्ठेरो पनि हुन्छ । खान्जी अक्षरको बीचमा हिरागानाको प्रयोगले कुन ठाउँमा रोकिएर पढने, कुन ठाउँमा ढिलाे र छिटाे पढ्ने भन्ने कुरा थाहा पाउनुकाे साथसाथै स्वरकाे अाराेह-अवराेह पनि थाहा हुन्छ ।
त्यसैगरी जापानी भाषामा नाम र क्रियाकाे बीचमा अाउने 助詞 (Particle) पनि हिरागानामा नै हुने भएकाेले सबै हिरागानामा मात्रै लेख्दा कुन नाम हाे, कुन क्रिया हाे र कुन पार्टिकलले जाेडेकाे हाे भनेर थाहा पाउन अझ अलमल हुने हुन्छ । त्यसैले सबैको लागि अप्ठेरो भनिएकाे खान्जी अक्षरले वाक्यलाई पढ्न र बुझ्न सजिलो बनाई राखेको हुन्छ ।
हिरागाना मात्रै प्रयोग गरिएको एउटा उदाहरण हेरौं:
わたしはがくせいです。वातासीवागाकुसेइदेस । (म विद्यार्थी हुँ ।)
माथिकाे वाक्यमा कहाँदेखि पढेर कहाँ राेकिने, स्वरकाे अाराेह-अवराेह के हाे ? भन्ने कुरा थाहा पाउन एकछिन घाेरिएर हेर्नै पर्ने हुन्छ । यसलाई खान्जी अक्षरमा लेख्दा यस्ताे हुन्छः- 私は学生です。राताे अक्षरमा बनाइएकाे खान्जीकाे बीचमा は पार्टिकल अाएकाे छ । 私は भनेर राेकिए पछि 学生ですभन्दा पढ्न र बुझ्न सजिलाे हुन जान्छ । अाजभाेलि कम्प्यूटर, स्मार्ट फोन तथा ट्याबलेटहरूमा सजिलै खान्जी लेख्न र पढ्न मिल्ने भएपछि मेहनत गरेर खान्जी पढ्ने र लेख्ने गर्न जापानीहरूले पनि छाडिसकेका छन् । स्कुल पढ्ने जापानी वालवालिकाहरू पनि गेम खेल्नमा व्यस्त भएपछि खान्जीकाे अभ्यास गर्न त्यति मन दिंदैनन् । त्यसैमाथि खान्जी प्रयाेग नगर्ने देशका नागरिक हामीहरू जापान अाएपछि अझ भाषाकै समस्याले अलमलमा पर्ने गर्दछाैं । खान्जी प्रयाेग गर्ने देश चीनका नागरिकहरू जापान अाएपछि जापानी खान्जी लगभग जापानी खान्जीसँग मिल्दाेजुल्दाे भएकाे कारणले गर्दा धेरै कुराहरूमा अगाडि देखिन्छन् । उच्चारण फरक भए पनि अर्थ भने उनीहरूले बुझ्दछन् । जापान बसाइ लामाे भएपछि र हरेक दिन खान्जी अक्षर हेर्दा कतिपय अवस्थामा उच्चारण नजाने पनि अर्थ बुझ्न सकिने कुराहरू जापानका अगुवाहरू बताउँछन् ।
जस्तैः 空車 । याे खान्जीकाे एकैपटक उच्चारण गर्न नजाने पनि वेग्लावेग्लै राखेर हेर्दा यसकाे अर्थ बुझ्न सकिन्छ । छुट्टाछुट्टै हेर्दा 空 (そら) काे अर्थ अाकाश अथवा खाली भन्ने हुन्छ भने 車 (くるま) काे अर्थ माेटर अर्थात पाङ्ग्रा भन्ने बुझिन्छ । दुवैलाई मिलाएर हेर्दा (くうしゃ-कुउस्या) खाली गाडी भन्ने अर्थ हुनजान्छ । हामीले ट्याक्सीकाे अगाडि याे खान्जी अक्षर देख्याैं भने गाडी खाली छ भन्ने अर्थ बुझ्नुपर्छ । यस्ताे अक्षर देखिएकाे ट्याक्सीलाई हात उठायाैं भने तुरून्तै सेवाकाे लागि हाजिर हुन्छ । यसरी उच्चारण नजाने पनि भिन्नभिन्न खान्जीकाे अर्थबाट यही अर्थ हाे भन्ने कुरा थाहा पाउन सकिन्छ । जापानी खान्जी र चिनियाँ खान्जी अक्षर मिल्दाेजुल्दाे भएकाेले याे खान्जी देख्ने बित्तिकै उच्चारण नजाने पनि चिनियाँ नागरिकले अर्थ बुझ्ने गर्दछन् । यसरी अर्थपूर्ण सूचना दिने कुरामा खान्जी अक्षरकाे निकै ठूलो भूमिका रहन्छ । त्यसैले खान्जी अावश्यक छ भन्न सकिन्छ ।
अर्को उदाहरणः पसलहरूकाे अगाडि 閉店 (へいてん)、開店 (かいてん) देख्न सकिन्छ । उच्चारण नजाने पनि 店 (てん) भनेकाे दुकान अर्थात पसल हाे । 閉 याे खान्जीकाे अर्थ बन्द र 開 यसकाे खुल्ला भन्ने अर्थ हुन्छ । दुवैलाई मिलाउँदा पसल बन्द र पसल खुल्ला भन्ने अर्थ रहन्छ । उच्चारणकाे हिसावले हेईतेन र खाईतेन हुन्छ तर उच्चारण नजाने पनि बन्द, खुल्ला र पसलकाे खान्जी मात्रै देखेर पनि पसल बन्द र खुल्ला हाे भन्ने अर्थ बुझ्न गाह्राे पर्दैन । त्यसैले खान्जी अक्षर र त्यसकाे अर्थकाे गहिराइसम्म बुझेर खान्जी पढ्ने बानी बसाल्नुहाेस् । हरेक दिन हेर्ने, सम्झने र अभ्यास गर्ने गर्नु भयो भने अप्ठेराे खान्जी पढ्न रमाइलाे र सजिलाे हाेला ।
Prevयस्तो हुन्छ नेपालबाट डिपेन्डेन्ट ल्याउनका लागि पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया
Nextजापानमा ट्याटु किन मन पराईदैन ?
September 9, 2020 January 9, 2021